Quel est le climatiseur mobile le plus silencieux ? | Lyse Concept
Olimpia Splendid yakavhota yakanakisa mobile air conditioner Winner wekuenzanisa kwedu, iyo Olimpia Splendid air conditioner inoshamisa nesimba rayo rekutonhodza, ichiratidza zviuru gumi nezviviri zveBTU pamamita. Sur le même sujet : Quel climatiseur pour une maison de 100m2 ?.
Iwo gumi akanakisa anotakurika air conditioners kuti agare achitonhorera zhizha rose Voir l’article : Climatisation.
SUNTEC Advance 12.0 Eco R290: yakanakisa yepamusoro yemhando.
De’Longhi Pinguino PAC N82 ECO: iyo yepamusoro-yekupedzisira imwe nzira.
Argo Relax Style: yakanakisa yepakati-renji.
Olimpia Splendid Dolceclima Compact 9 P: iyo yepakati-renji imwe nzira.
Iyo Whirlpool PACW212HP ndiyo yedu yatinofarira yakanyarara inotakurika air conditioner. A voir aussi : Climatisation. Kana iwe uchitsvaga yakanyarara mobile air conditioner, muchina uyu ndiwo waunoda! Pakati perunyorwa rwedu rwemaair conditioner akanyarara, iyi ndiyo yakanyanya kunyarara ine decibel level ye52 dB.
Hunhu hukuru ndeyechokwadi kutonhora kwesimba, izvo zvinosarudza kugona kutonhorera mukamuri. Iri simba rinoratidzwa muBTU (British Thermal Unit). Kuti uwane pfungwa yesimba, unoda zviuru zvinomwe zveBTU zvekamuri ye15m2, 9,000 BTU ye25m2, uye 12,000 BTU ye35m2.
Ndeipi mhando yakanakisa yeinotakurika air conditioner? Iwo gumi akanakisa anotakurika air conditioners kuti agare achitonhorera zhizha rose
A monobloc mobile air conditioner inofanira kuiswa pedyo negonhi kana hwindo kuti ibudise mhepo kunze kuburikidza nekubuda kwemhepo. Nekudaro, kudzikamisa kupisa / kutonhora kurasikirwa zvakanyanya sezvinobvira, zviri nani kuboora gomba (10 kusvika 15 cm) mumadziro kuti pombi ipfuure.
Kuisa inotakurika air conditioner caulking kit hazvigone kuve nyore. Iwe unongofanirwa kuve neVelcro tepi kutenderedza kuvhura, kwaunogona kukwenya jira ne zipper. Saka, kana iwe ukavhara zip, kuvhura kwehwindo kunongoerekana kwakonzerwa.
Iyo inotonhorera yemhepo ndiyo yakanakira kukanganisa kutonhodza imba yako. Kunyanya kushanda kupfuura fan, uye zvakanyanya hupfumi kupfuura mhepo yekufemesa, inokutendera iwe kuti uwane mashoma akakosha madhigirii panguva dzekupisa kwakanyanya.
Nzira yekudurura sei mhepo inotonhorera? Kana uine inotakurika air cooler, iva nechokwadi chekubvisa mvura kunze nemukati memba yako. Kune mahwindo emhepo inotonhorera modhi, haufanirwe kuifambisa. Chaunoda kuita chete kurega mvura ichibuda nepahwindo.
Mashandisiro emhepo inotonhorera Zviri nyore kwazvo, uye maitiro ekushanda anosiyana zvishoma kubva kune imwe mudziyo kuenda kune imwe: ingozadza tangi nemvura yakachena, batanidza inotonhorera yemhepo kune mains, uye dzvanya bhatani re « pa ».
Lire Toilette Sanitaire
Kunyangwe kana iyo inotonhorera yemhepo isingadyi magetsi akawanda, kushandiswa kwayo kunofanira kuverengerwa. Kana kazhinji isingasviki 100 watts, inogona kudzika kusvika pa50 watts kune yakanyanya hupfumi.
Concretely, mudziyo une tangi hombe rinozadzwa nemvura usati waibatanidza kune mains. Pane imwe nzira, chigadziro chinosveta mumhepo inopisa uye chinochipfuura nepadhi, yakanyoroveswa nemvura iri mutangi. Pasi pekuita kwe evaporation, mhepo inotonhorera.
Kushanda kweiyi portable ventless air conditioner iri nyore. Mvura sezvainoputika icharasikirwa nekoriori, iyo ichava nemigumisiro yekutonhodza mvura. Mhepo inodziya yemukati inozopfuura nepasefa yakanyoroveswa nemvura yakatonhodzwa inogadzirwa neair conditioner.
Nzira yekubvisa sei mvura kubva kune mobile air conditioner? Iyo hose yekudhonza inobatanidza zvakananga kune inoyerera yekubuda kweiyo mobile air conditioner. Kudurura mvura, ingoitungamirira pasi. Mvura inobva yayerera yakasununguka mumudziyo unounganidza. Kana mvura yose yapera, bvisa hose yekudhonza.
Isa mudziyo wako pedyo nehwindo, panzvimbo yakatwasuka, muimba yaunoda kuiisa. Batanidza hose yekuburitsa mweya kune inotakurika air conditioner woiisa panze, nepahwindo rako. Vhara hwindo zvakanyanya sezvinobvira.
Kana iwe uchida kunyatso bvisa mhepo inopisa, iwe uchafanirwa kugadzira yekubuda mumadziro kana mukuvhura. Ingave yegonhi kana hwindo, iwe muzviitiko zvese unofanirwa kuboora kunze kuti upfuure sheath.
Isu tinogovana newe zano redu rekubuda kweiyo mobile air conditioning: ingo shandisa inotambanuka yekubvisa duct yedhayamita yakakodzera. Kureba kwayo kunofanira kuva kupfupi sezvinobvira. Inowanzo kupihwa nemudziyo.
Iko kushanda kweiyo mobile reversible air conditioning kunobva pane imwechete musimboti seyakagadziriswa reversible air conditioner. Kugadzira kutonhora, mudziyo unodhirowa mumhepo yakadzika uchishandisa mhepo / mweya kupisa pombi. Mhepo inopfuura nepavharuvhu yekuwedzera uye inotonhodzwa uchishandisa refrigerant.
Comment mettre en marche un climatiseur mobile ?
Kuisa yako mobile air conditioner, enda nenzira inotevera: isa pedyo neinovhura sisitimu (hwindo kana musuwo wekutsvedza); batanidza mhepo yayo yekubuda duct; imise kwemaawa angangoita makumi maviri nemana usati waishandisa.
Mafefetera emhepo anotakurwa anobvisa mhepo inopisa kuburikidza negwara rinochinjika rinopfuura nepahwindo rakavhurika kana buri riri mumadziro, zvichiita kuti zvive nyore kupfuura mafeni ari nyore. Saka iwe unofanirwa kusiya hwindo rakavhurika (panjodzi yemhepo inopisa ichipinda mukamuri) kuti ubvise kupisaâ € ¦
“Zvisinei, maairconditioner anoshanda zvakanyanya kudarika mafeni, kunyanya matunhu ekumaodzanyemba. … Mhepo dzemhepo dzinenge dzakafanana sisitimu: iri, inoenderera Haykel, ichizadza tangi reair conditioner nemvura inotonhora, iyo uye nekuda kwemhepo, inopa kutsva kupfuura fan iri nyore ”.
Inofanira kuiswa panzvimbo yakaenzana, iva nechokwadi chokuti hapana zvipingamupinyi mukati me50 cm (zvichienderana nemuenzaniso wemuchina) kumativi emudziyo, uye kuti iri pedyo netsime remagetsi ega ega.
PrevPreviousQuelle est la meilleure marque de climatiseur mobile ?
NextQuel dB pour un climatiseur mobile ?Next